လင်းဦး(စိတ်ပညာ) _ Lin Oo: Dubai ရဲမှ မြန်မာအမျိုးသမီး သေဆုံးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးနေခြင်း
Dubai ရဲမှ မြန်မာအမျိုးသမီး သေဆုံးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးနေခြင်း
Dubai ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်သမား တစ်ယောက်သည် တနင်္ဂနွေနံနက်(၁၀)နာရီတွင် Dubai ရှိ Al Nahda လမ်းဘေးရှိ ဆက်သွယ်ရေးမြေအောက် ပြုပြင်ပေါက်အတွင်း၌ သေဆုံးနေ သော မြန်မာအမျိုးသမီး တစ်ယောက်၏ ခန္ဓာကိုယ်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရ သည်။ Dubai ရဲကို ဆက်သွယ်ခေါ်ယူ၍ မှုခင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ဌာနမှ ၎င်းဖြစ်ပွားရာ နေရာကို ရှင်းလင်း ခိုင်းထားပါသည်။ များမကြာမီ ခန္ဓာကိုယ်ကို သူနာပြုကားဖြင့် တင်ဆောင်သွား ပါသည်။ မျက်မြင်သက်သေများ၏ အဆိုအရ အမျိုးသမီးမှာ ကိုယ်လုံးတီးအနေအထားဖြင့် တွေ့ရသည်ဟု ဆိုပါသည်။
သေဆုံးသူ အမျိုးသမီး၏ ခြေထောက်ကို ပထမဦးဆုံးတွေ့ရှိရပြီး သူမ၏ခေါင်းမှာ တွင်းအတွင်း၌ ရောက်ရှိ နေခြင်းဖြစ်သည်။ မြင်ကွင်းမှာ ထိတ်လန့်စရာ ကောင်းလှသည်ဟု ဆိုပါသည်။
သူမနှင့် နေထိုင်သူများနှင့် အာရပ်စော်ဘွားများ လေကြောင်းလိုင်း လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တို့က မြန်မာအမျိုးသမီး လေကြောင်းမယ် ပျောက်နေသည်မှာ (၅)ရက်ခန့်ရှိပြီဟု ထွက်ဆိုပြောကြားကြောင်း CID ဒါရိုက်တာ ဗိုလ်မှူးကြီး Khalil Al Mansouri မှ ပြောဆိုပါသည်။
ရဲမှ သူမ၏ယောကျာ်လေးအပေါင်းသင်းတစ်ဦးဖြစ်သော အိန္ဒိယအမျိုးသားတစ်ဦးကို ထိန်းသိမ်းထားပါသည်။ သူမ ပျောက်ဆုံးနေကြောင်း သတင်းပို့သည့်နေ့တွင် အဆိုပါ အိနိ္ဒိယလူမျိုးမှာ သူမနှင့် နောက်ဆုံးရှိနေခဲ့သူဟု ရဲမှ ယုံကြည်၍ ထိန်းသိမ်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ CID ဗိုလ်မှူးကြီးက ၎င်းတို့ သေဆုံးသည့်အကြောင်းရင်းကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေဆဲရှိသည်ဟု ဆိုပါသည်။ သေဆုံးသူ မြန်မာအမျိုးသမီး၏ အခန်းဖော် ပြောဆိုချက်အရ သေဆုံးသူမှာ အသက်(၃၀)ခန့်ရှိပြီး၊ ငယ်ရွယ်လှပကာ၊ အထူးသဖြင့် မြန်မာအခန်းဖော်များအပေါ် ချစ်ခင် ကြင်နာမှုရှိသည်ဟု ပြောဆိုပါသည်။ သူမ၏အခန်းဖော်၏ အဆိုအရ၊ ၂၀၀၈ခုနှစ် ၊ စက်တင်ဘာလတွင် Dubaiသို့ အတူတကွ မိမိတို့ရောက်ရှိပါကြောင်း၊ သေဆုံးသူ အမျိုးသမီးမှာ အိန္ဒိယ အမျိုးသားတစ်ယောက်နှင့် လွန်ခဲ့သော (၁၅)ရက် ၊ရက်(၂၀)ခန့်လောက်က မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက် သူမအား ချစ်ရေးဆိုခဲ့သည်ဟု မိမိအား ပြောဆိုဖူးကြောင်း ဆိုပါသည်။ မိမိအနေဖြင့် သေဆုံသူအမျိုးသမီးမှာ အိန္ဒိယလူမျိုး အမျိုးသားအပေါ် သူငယ်ချင်းအဖြစ်သာ ဆက်ဆံခဲ့သည်သာ တွေ့မြင်သိရှိပါကြောင်း ပြောဆိုပါသည်။ သူမ၏ သူငယ်ချင်းတစ်ဦးက သေဆုံးသူအမျိုးသမီးကို တာဝန်ချိန်တွင် ၎င်းအိန္ဒိယအမျိုးသားနှင့် ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၅)ရက်နေ့တွင် မြင်တွေ့ခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။
အာရပ်စော်ဘွားများလေကြောင်းလိုင်း လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်က ၎င်းကိစ္စများအတွက် မှတ်ချက်ပြုရန် ငြင်းဆိုခဲ့ပြီး ၊ အဆိုပါကိစ္စသည် ရဲကိစ္စသာဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။
****မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် ၎င်းကိစ္စကို ယခုအချိန်ထိ အတည်ပြုခြင်း မရှိသေးပါ။ အကယ်၍ အတည်ပြုပြီးပါက မည်သို့ တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းမှုများ ပြုလုပ်မည်နည်း......။ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာလူမျိုးများ၊ မြန်မာ အမျိုးသမီးများ မိမိကိုယ်ကို ထိန်းသိမ်းရာတွင်လည်းကောင်း၊ ၎င်းနိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသားများအပေါ် ထားရှိသော သဘောထားများသည် မည်သို့နည်း။
ဤသတင်းဆောင်းပါးရေးရန် Source များ ပေးပို့ခဲ့သော ညီငယ် အား ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း
By လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on at Saturday, February 28, 2009
ရှင်းရှင်းလင်းလင်း အဖြေတစ်ခုတော့ ထွက်သွားစေချင်ပါတယ်။ အရာရာမှာ ရှံုးနိမ့်ခံနေရင် အနိုင်ကျင့်ခံနေရင်တော့ မကောင်းလှပါဘူး။ သူများနဲ့တန်းတူ တော်ရဲ့ တတ်ရဲ့သားနဲ့ ခံနေရတာ ပိုခံပြင်းစရာပါပဲ။ တာဝန်ရှိသူတွေလည်း တာဝန်ယူတတ်ကြပါစေဗျာ။
February 28, 2009 at 2:11:00 PM GMT+6:30
ကြားရတဲ့သတင်းကလည်း နားမသက်သာဘူး ရှင် လေယာဉ်မယ် က ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး အဲဒီမှာနေတာလား သေတဲ့မိန်းကလေး က လေယာဉ်မယ်ပဲလား ....
February 28, 2009 at 2:44:00 PM GMT+6:30
စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ သက်ဆိုင်သူများ တာဝန်ယူနိုင်ကြပါစေ။
February 28, 2009 at 3:08:00 PM GMT+6:30
February 28, 2009 at 3:52:00 PM GMT+6:30
ကျွန်တော် ဒူဘိုင်းကို ခဏရောက်ဖူးတယ်။ အဲဒီက မြန်မာအလုပ်သမားတွေဘဝကို မြင်ရတာ အရမ်းသနားဖို့ကောင်းပါတယ်။ တကယ့်ကို မသွားသင့်တဲ့ နေရာပါ။ အဆင့်အတန်းလည်း အရမ်းခွဲခြားပါတယ်။ ဘဝအတွက် ဘာမှ အာမခံချက်မရှိပါဘူး။
February 28, 2009 at 4:58:00 PM GMT+6:30
စိတ်မကောင်း စရာသတင်းပဲ ကြားတော့ ကြားမိပါတယ်။
February 28, 2009 at 6:33:00 PM GMT+6:30
ွ ကိုယ့်ပြည်ကိုယ့်ရွာမှာဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံခြားမှာဖြစ်ဖြစ် မြန်မာ မိန်းမတွေ အနိုင်ကျင့်ခံရပြီးသေတာ ဆန်းတော့မဆန်းပါဘူး ဒါပေမဲ့ သေတာနဲ့ပတ်သက်သက် တခြားဘာနဲ့ပဲပတ်သက်သက် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကမှ မည်သည့်အခါမှ တာဝန်ယူတာမကြားဖူးပါဘူး ဒီတော့ကာ သေရင်သေတယ်ပေါ့ နော ဘာတတ်နိုင်မလဲ
February 28, 2009 at 9:24:00 PM GMT+6:30
ဘာဖြစ်ဖြစ် အချင်းချင်း ရိုင်းပင်းသင့်ပါတယ်။
March 1, 2009 at 3:24:00 PM GMT+6:30
အခုလိုအဖြစ်ဆိုး ကြံုတွေ့ရတာ--အလွန်ပဲ ကြေကွဲစရာပါ--
March 3, 2009 at 4:59:00 AM GMT+6:30
စိတ်တော့မကောင်းပါ တခြားနိုင်ငံတွေမှာ အလုပ်လုပ်ကြမယ်ဆို မြန်မာမိန်းကလေးတွေအရမ်းသတိထားသင့်ပါတယ်
March 4, 2009 at 1:52:00 PM GMT+6:30
It'sabad news. I think Myanmar girls should think twice before working in abroad.
March 15, 2009 at 9:40:00 AM GMT+6:30